बिग बास लिगमा आज ब्रिसबानेविरुद्ध खेल्दै मेलबर्न, सन्दीप खेल्ने पक्का ? « Khabarhub
बिग बास लिगमा आज ब्रिसबानेविरुद्ध खेल्दै मेलबर्न, सन्दीप खेल्ने पक्का ?
काठमाडौं– अस्ट्रेलियाको बिग बास लिगमा आज (शुक्रवार) नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका लेगस्पिनर सन्दीप लामिछानेको टीम मेलबर्न स्टारर्स ब्रिसबाने हिटविरुद्ध खेल्दै छ । ब्रिसबाने क्रिकेट मैदानमा दिउँसो ३ः२५ बजे शुरु हुने खेलमा लेगस्निपर सन्दीप मेजर ११ मा पर्ने संभावना बलियो छ ।
यसअघि सन्दिपकाे स्थानमा खेलिरहेका पेश बलर लियम पुङ्कीट मेजर ११ मा नपरेसँगै शुक्रवारकाे खेलमा सन्दिपकाे संभावना बलियाे बनेकाे हाे ।
मेलबर्न स्टारर्सबाट ४ खेल खेलेका लामिछानेले यसअघि ८ विकेट लिएका थिए । बिग बासको तीन चरणका खेल सकिँदा लामिछाने सर्वाधिक विकेट लिनेको सूचीमा शीर्ष स्थानमा थिए ।
जनवरी १ मा अस्ट्रेलियाबाट बंगलादेश प्रिमियर लिग (बीपीएल) मा सिलेट सिक्सरबाट खेल्न बंगलादेश पुगेका सन्दीप जनवरी २५ देखि यूएईमा शुरु भएको एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय तथा ट्वान्टी—२० अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङ्खलामा सहभागी भएका थिए ।
यूएईविरुद्धको श्रृङ्खलामा २—१ को जीत निकाल्दै नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली सोमबार स्वदेश फर्किएको थियो भने सन्दीप यूएईबाट सिधै बीबीएलका लागि अस्ट्रेलिया उडेका थिए ।
मेलबर्नमामा लामिछानेको स्थानमा आएका इङ्ल्यान्डका पेश बलर लियम पुङ्कीटले ८ खेलमा १२ विकेट लिएका छन् ।
अब दुई खेलमा लगातार जीत निकाल्न सके मेलबर्न बीबीएलको नकआउट चरणमा पुग्ने छ । सन्दीप मेलवर्नको सुरुवाती खेलमा पहिलो रोजाइमा परेका थिए । तर, बंगलादेशमा भने उनी केही खेलमा बेञ्चमा बस्नु परेको थियो ।
प्रकाशित मिति : २५ माघ २०७५, शुक्रबार १२ : १६ बजे